Ahoana no hamaritra ny karazana tarehy?
"Manontany tena aho hoe manao ahoana ny endrik'iza?" - ny hevitra toy izany na alohan'ny hamangian'ny tsirairay amintsika. Ary tsy mahaliana fotsiny, fa mila manokana minitra vitsy fotsiny mba hamaritana ny karazana olona. Ary ahoana ny fomba hanarahana ny tolo-kevitr'ireo mpanakanto sy mpitsangatsangana marika izay manomboka ny torohevitr'izy ireo amin'ny fehezan-teny hoe: "Raha manana karazana tarehy toy izany ianao, avy eo ..."? Saingy noho ny antony iray dia tsy milaza aminao ny fomba hamantarana tsara azy ireny izy ireo. Saingy avy eo dia mandany fotoana eo anoloan'ny fitaratra iray isika, ampijalian'ny fanontaniana hoe: "Inona no endrik'olona tadiaviko, ahoana no hamaritana azy?".
Raha manana fisainana ampy tsara ianao, dia afaka mitsangana eo anoloan'ny fitaratra ianao ary maka ny endriky ny geometrika izay toa ny oval ny tarehinao. Matetika anefa dia misy endrik'olona iray tsy mifanaraka amin'ny famaritana azy ara-jeômetika, ary ny mahafantatra fa ny anaran'ny sokajy sokajin'olona dia tsy ho toy izany koa. Raha ny marina, ny manampahaizana manokana sy ny haingo dia matetika miasa amin'izy ireo.
Famaritana ny endrik'olona
Misy karazany 7 amin'ny oval ny tarehy: boribory, oval, rectangular (elongated), kianja, diamondra, fo, triangatra. Mba hahazoana valiny amin'ny fanontaniana momba ny fomba hahafantarana ny karazana tarehiko dia avelao henjana (ny tarehy sy ny tendrony rehetra dia tokony hiditra ao) miaraka amin'ny fitaratra, ny mpitondra ary ny roa minitra vitsy. Raha tsy manana fahafahana kely ny ho very ao anatin'ireo endri-tarehimarika, dia mitory ny karoka 2-3 izahay. Mba hanaovana izany dia mila mandalo fitsapana kely ianao, ary araho ny dingana etsy ambany.
Manao ny volony rehetra izahay mba hahafahana misokatra tanteraka.
Mamefy ny halavan'ny tarehy avy amin'ny tsiron'ny haavon'ny volo eo amin'ny handrina amin'ny tendron'ny mina.
Ny sandany vokatra dia divizina amin'ny 3, tadidintsika io vokatra io - ny sandan'ny A.
Isay no mandrefy ny elanelana amin'ny tendron-tsinapy ka hatrany amin'ny fototry ny orona, io sanda io dia B.
Ampitahao ny soatoavina roa. raha:
B, avy eo ny tarehinao, izay mety hahatonga anao ho toy ny kianja;
A = B, avy eo ny endriky ny tarehinao, indrindra amin'ny "fo" na oval.
Ankehitriny dia efa nanapa-kevitra ianao ny sokajy izay misy ny tarehinao, dia mbola mamaky ny filazalazana ny karazana tarehy mifanaraka amin'ny vokatra azo. Tsy voatery hoe mitovy daholo ireo toetra rehetra ireo, fa ny endriny dia ny iray izay ahitana ny maro amin'ireo fifanandrifian-javatra.
Toetran'ny endrika endrika
Fehiny: Ny halavan'ny tarehimarika dia mitovy amin'ny halavany, ary ny ampahany betsaka indrindra dia ny takolaka. Ny endriky ny tarehy dia malefaka, malefaka.
Oval: ny halavan'ny tarehimarika dia in-1.5 ny sakany, ny endriky ny tarehy dia tsara symmy tanteraka.
Kianja: ny haben'ny taolam-paty sy ny handrina dia mitovy amin'ny haben'ny refin'ny mofomamy, ny endriky ny tarehy dia maranitra sy maranitra.
"Almaz": takolaka lavalava na whisky, loha ety sy fohy, matevina manify.
Rectangular (lolonged): Whisky sy mina dia mitovy amin'ny andalana mitovy. Ny karazana manontolo dia mitovitovy amin'ny kianja, saingy eto ny halavan'ny tarehimarika dia lehibe lavitra noho ny sakany.
"Ny fo": mitombo ny endriny amin'ny tadiny, saingy tsy mitovy amin'ny endriky "diamondra" ary ny handrina sy ny taolam-paty dia malalaka, mitovy habe mitovy.
"Triangolo": loha ety, mihamitombo tsikelikely amin'ny endriny ny tarehiny.
Fantatrao izao ny karazana tarehinao, midika izany fa azonao atao ny mamorona tsara ny sarinao mba hahasarika kokoa. Ary aza mihaino ny filazana fa ny karazana idealy dia oval. Eny, ny mpanakanto sy ny mpanao hatsikana dia mihevitra fa izany no izy, fa fotsiny satria io no zavatra mora indrindra hiara-miasa amin'ny olona toy izany. Raha ny marina, tsy misy ny idealy, ary afaka manintona anao amin'ny endrika endrika ianao. Tsy mino ahy ve aho? Araka ny hevitrao, inona ny endriky ny tarehin'ny hatsaran-tarehimarika fantatra fa Angelina Jolie, miezaha mamaritra. Tena oval ve izany? Saingy tsia, ny endrika tarehin'io hatsarana io dia kianja. Noho izany dia kely kokoa ny alahelo momba ny tsy fitovian'ny idealy hafa.
Inona no atao hoe crème tsara kokoa?
Japoney mahatsikaiky tarehy
Iza no trondro mivelona amin'ny trondro neon?
Sakafo narotsaina sy nifoka tao an-trano
Firy ny kaloria nodorana rehefa nilomano?
Potato miaraka amin'ny taolam-biby - solika
Lisy rano avy amin'ny tavoahangy plastika
Nahoana no mamono ny tranom-bitsika ny hamstera?
Sakafo matavy amin'ny fatiantoka
Zavakanto any Sudak
Ahoana ny handraisana acmu?
Selena Gomez dia nampiseho lanja lehibe tamin'ny fialantsasatra
Ahoana ny fisafidianana ski ho an'ny ankizy?